“Waxa dhex maray Sergio Ramos iyo Mohamed Salah waa wax iska caadi ah”…Harry Kane – Gool FM
“Waxa dhex maray Sergio Ramos iyo Mohamed Salah waa wax iska caadi ah”…Harry Kane
(England) 08 Sept 2018. Harry Kane ayaa xaqiijiyay in dhacdadii ku dhex martay xidigaha Sergio Ramos iyo Mohamed Salah finalkii Champions League, loo arko inay tahay wax iska caadi ah marka loo fiiriyo kubada cagta.
Sergio Ramos ayaa dhaawac dhanka garabka ah ugu geestay Mohamed Salah finalkii Champions League ee xili ciyaareedkii lasoo dhaafay, taasoo sababtay in laacibka reer Masar uu isla qeybtii hore ciyaarta ka baxo garoonka.
Kabtanka kooxda Real Madrid ayaa tan iyo kulankaas la kulmay dhaleeceeno kala duwan ee kaga timid gudaha dalka England iyo caalamka sababa la xiriiria inuu si ula kac ah u dhaawacay Salah, laakiin Harry Kane ayaa arintan ku tilmaamay mid iska caadi ah.
“Ramos waa daafac weyn, waxaan kahor imid xili ciyaareedkii lasoo dhaafay, waa ciyaaryahan xoogan ee aad u wanaagsan”.
“Garsoorayaasha waxay ku gudi jiraan gudaha garoonka, si loo xakameeyo waxyeelada uu sameenayo Sergio Ramos”.
Tababare Tite oo sheegay in xulka qaranka Brazil uu haatan kasoo kabanayo niyad jabkii koobka aduunka 2018